Caalamka, 16 October 2018
Talaado 16 October 2018
Biljam: Gabar Soomaali ah oo loo doortay gole deegaan
Sahra Maxamed Khaliif, oo ah gabar da’ yar oo Soomaaliyeed, ayaa ka mid noqotay xubnaha baarlamaanka golayaasha deegaanka dalka Biljamka oo dhawaan doorashadiisa ay dhacdey.
Australia oo ka fakareysa inay Qudus u aqoonsato caasimada Israel
Ra’iisul wasaaraha Australia, Scott Morrison ayaa sheegay inuu ka fiirsanayo sidii ay dowladdiisa magaalada Qudus ugu aqoonsan laheyd caasimadda Israel, sidoo kalana ay safaaraddooda magaalada Tel Aviv ay ugu rari lahaayeen Qudus.
Canada: Isticmaalka xashiishka oo la sharciyeeyey
Dalka Canada waxaa berri ka dhaqan galaya sharci ogolaanaya isticmaalka, ganacsiga iyo beerashada maandooriyaha xashiishadda.
Wararkii u Dambeeyey ee J. Khashoggi
War qoraal ah oo ka soo baxay Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sacuudiga Cabdul Casiis Bin Sacuud ayaa eedeyntan ku tilmaamay “been” lagu sharaf dilayo Sacuudiga.
Senatka oo dalbaday in la baaro kiiska Khashoggi
Koox senataro Mareykan ah ayaa ku cadaadinaya madaxweyne Donald Trump inuu baaritaan ku sameeyo maqnaanshaha suxufiga Sacuudiga, taasi oo hogaamin karta cunaqabateyn la saaro saraakiisha iyo hay’adaha Sacuudiga.